जोर्डन बिरुद्द पराजित भए पछि, के छ त नेपालको अन्तिम बाटो ?
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, संवाददाता June 10, 2021
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमान्डौ। नेपालको अन्तिम बाटो के हो त ?
राउण्ड दुइ अन्तर्गत चाइनिज ताइपेलाइ पहिलो खेलमा २-० गोलान्तरले पराजित गरेको नेपालले हिजो भएको खेलमा जोर्डनसंग ३-० को हार बेहोरेको छ। २४ औ मिनेटमा नेपालको पेनाल्टी बोक्समा फल हुदा, जोर्डनले गोल गर्दै पहिलो अग्रता लिएको थियो। किरण चेम्जोङ्गको उत्कृष्ट प्रदर्शन रहेको थियो। ९० मिनेट खेलिसक्दा नेपालले ३-० गोलको पराजय भोगेको थियो।
जोर्डन बिरुद्दको हार पश्चात नेपालको विश्वकप २०२२ को विश्वकप खेल्ने सभावना समाप्त भएको छ। तर, एसिया कपमा सहभागिता जनाउने मौका भने अझै जिवितै छ। नेपालले एसियन कप छनोट अन्तर्गतको तेस्रो राउण्डमा भने प्रवेश गर्दैन। आठ समूहका उत्कृष्ट चारको अंक तालिकामा नेपाल अन्तिम स्थानमा रहेको छ। सो समूहका उत्कृष्ट चार टोलिले सिधै एसियन कप २०२३को तेस्रो राउण्डको छनोटमा पुग्ने छन् भने बाकी रहेका पुच्छरका चार टोलिले अरु आठ टोलि सहित गरेर प्ले अफ राउण्ड खेल्ने छ जसमध्ये शिर्ष ८ टोलिहरुले एसियन कप छनोटको तेस्रो राउण्ड प्रवेश गर्ने छन्।
नेपालले जेठ २८ मा अस्ट्रेलियाको सामना गर्ने छ। नेपालको सबै बाटोहरु बन्द भैसकेको छ र जिवितै रहेको अन्तिम बाटो भनेको प्ले अफको मार्फत एसियन कप छनोटको तेस्रो राउण्ड प्रवेश गर्ने हो।
Posted in फुटबल, मुख्य खबर, राष्ट्रिय फुटबलTagged #asia cup 2023 #asia cup qualifier #Nepal
स्पेन भ्रमण अघि, नेपालले जुलाईको पहिलो साताबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने !!
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स काठमान्डौ | नेपालले जुलाईको पहिलो सातबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने !! आइसीसी विश्व क्रिकेट लिग २ को दोस्रो राउण्ड अन्तर्गतका खेलहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्न नेपालले २०-२२ दिनको लामो प्रशिक्षण गर्ने छ। सो प्रशिक्षणका निम्ति नेपाली टोलीले जुलाईको पहिलो सातामा, बाहिरको देशको भ्रमण गर्ने छ। उक्त राउण्ड अन्तर्गत नेपालले, […]
लामो समयपछि घरेलु फुटबलमा पुनरागमन गर्दै बिमल घर्ति मगर
युरो कप : समुह ए अन्तर्गतका खेलमा, इटाली र स्विजर्ल्यनड बिजयी !!!
सिजनको पहिलो खेलमा ब्रेण्ट्फ़र्डद्वारा आर्सनल पराजित !
युरोपका प्रसिद्द लिगहरु आजबाट सुरु हुदै !!
नेपाल – बंगलादेशबीचको दोस्रो मैत्रीपुर्ण खेल बराबरीमा टुङ्गियो !!
एम्बाप्पे र हालान्ड भित्र्याउने रियल मड्रिडको मास्टरप्लान